Waxyaabaha Muhiimka ah ee Lagu Ogaado Waxyaabaha Laga Helo Ka Qeybgalka Iskaashiga CCNP - ITS
Shahaadada Iskaashiga CCNP
Fursada Xirfadaha ee IT
Siyaasadaha Imtixaanka Iskaashiga CCNP-
Dib-u-hagaajinta dadaalka isku-duwidda CCNP
Shahaadada Iskaashiga CCNP:Baahida dheeraadka ah ee takhasuska iyo isku dhufashada xirfadlayaasha loola dagaallamo noocyada shaqo ee la midka ah waxay keeneen ulo iyo tilmaamo cusub. Tani waa mid aasaasi ah oo ka mid ah warshadaha IT-da halkaas oo xaaladdu ay tahay mid aad u liidata, sababtoo ah horumarinta joogtada ah ee horumarinta ganacsiga oo dhan. Mid ka mid ah, waa inuu ahaadaa mid caddaalad ah markaad dooranayso kartidooda awoodooda iyo go'aaminta shahaadooyinka iyo koorsooyinka waa in la aasaasaa sida ay ahaayeen.
Shahaadooyinka ugu qiimaha badan ee ganacsiga IT waa Shahaadooyinka Cisco waxayna leeyihiin qaab dhismeed oo lagu xaqiijinayo qof. Ahraamta waxay qaadaan heerarka heerarka marxaladda hoose ee saldhigga, oo ay weheliyaan heerka Associate, heerkaas oo ah heer xirfadeed, xiga waa heerka aqooneed ee ugu dambeysa ee kor ku xusan waa heerka dhismaha. Marka laga soo tago heerka qaybta heer kasta wuxuu leeyahay sagaal shahaadooyin ah, fahamkuna waa inuu bartaa oo ka nadiifi heer kasta. Shahaadooyinka hannaanka dhaqdhaqaaqooda
Heer kasta oo ka mid ah gudniinku wuxuu qayb ka yahay inuu ciyaaro oo uu ku lug yeesho horumarin cusub si loo buuxiyo shuruudaha shaqooyinka kala duwan. Heerka sare ee aad u tagto heerarkaaga kobcintaada iyo koorasyada isdaba-joogga ah waxay kugu xirayaan Xirfadahaaga Xirfadahaaga. 'Heerka Xirfadlaha' waxaa ku jira shahaadooyinka ka dib -
CCNP Qaabka iyo Beddelidda
Bixiyaha Adeegga CCNP
Iskaashiga CCNP - Heerka Sare
Wadashaqaynta CCNP waa barnaamijka shahaadada shaqada ee laga waday iyo tababarka waxaa la sameeyaa, xusuusashada, si loo wanaajiyo aragtidaada iyo kartidaada si aad u gudbiso "Qiimaynta Ganacsiga". Wixii kasta oo isku-dubbarid ah ee shabakadaynta isgaarsiinta ganacsiga horumarinta waa baahi aad u weyn Wadashaqaynta CCNP adiga kugula dhaqmayo awooddan si aad u dhisto karti-darrada dadaalka wadajirka ah ee ururka.
Waxaad sameyn kartaa shahaadadan kaddib marka la dhameeyo shahaadada loo baahan yahay ee shahaadada wadashaqaynta CCNA ama shahaadada CCIE. Ku xigta waa tababarka laguu qoondeeyay ee aad la kulantid
Hirgelinta Cisco IP Telefoon iyo Video, Qaybta 1
Hirgelinta Cisco IP Telefoon iyo Video, Qaybta 2
Baaritaanka Cisco IP Telefoon iyo Video
Hirgelinta Codsiyada Iskuxidhka Cisco
La socoshada waa imtixaannada lagaa rabo inaad iska nadiifiso-
Waxyaabaha soo socda ayaa ah qodobada xiisaha imtixaannada:
Imtixaanka - Muddada - Tirada Su'aalaha
300-070 CIPTV1 - 75 daqiiqo - 55-65
300-075 CIPTV2 - 75 daqiiqo - 50-60
300-080 CTCOLLAB - 75 daqiiqo - 55-65
XEROX-300 CAPPS - 085 daqiiqo - 75-55
Qofka 18years ama ka sarreeya ayaa u qalma baaritaanka.
Falanqaynta tijaabada waxay ku ansaxeysaa aruurta sawirada kombiyuutarka iyo calaamad sare, sidoo kale, laba aqoonsi oo sawir leh oo dawladeed ah. (Iyadoo aan ka yareyn hal calaamad ah).
Dadka ku nool dalalka sida Cuba, Iran, Suuriya, Waqooyiga Kuuriya iyo Suudaan way xaddidan yihiin imtixaankan.
Dhibcaha waxaa lagu xisaabtamayaa shabakada waxaana lagu xisaabtamayaa bixinta wax yar oo aan la dhaafi karin si ay u gudubto ama u xakameyso.
Ku rajo weyn inuu u baahdo inuu ku fadhiisto shan maalmood oo jadwal ah si uu dib ugu qaato imtixaanka.
Ka dib markii si wax ku ool ah loo dhammeeyo baaritaanka warbixinta dhibcaha ee lagu sawiray sawirka kombiyuutarka ee rajada la soo saaro.
Waxaad la socon kartaa horudhaca, xaaladda iyo dhibcaha shuruudaha shahaadada - Cisco Certifications Tracking System.
Shahaadada waa sharci ahaan muddo dheer waxaana dib loo soo celin karaa iyada oo la marin karo mid ka mid ah kuwan soo socda ka hor taariikhda dhammaadka baaritaanka:
Iminka 642-XXX / 300-XXX Imtixaanka heerarka xirfadeed,
Imtixaanka Qoraalka ee CCIE hadda,
CCDE imika ee ka soo gala / hooseysa dhulka Imtixaan,
CCAr waa la kulmaa.
Muhiimadda ugu weyn ee dhammaan waa in la raadiyo shahaadada iyo tababarka laga helo Cisco Learning Partner Partner sida "-"ITS"Kuwaas oo bixiya koorsooyinka ugu casriyaysan ee casriga ah ee Cisco ee xirfadlayaasha xidhiidhka.
Eeg Sidoo kale: Shahaadada CCNA - Hage Dhammaan
Tallaabada Tilmaamaha Tilmaamaha si aad u noqotid xirfadle CCNP Wireless Certified Professional